Lalàna manan-danja momba ny masoandro momba ny masoandro | Solar Solve Marine
Ny masoandro dia olana foana ho an'ny tantsambo eny an-dranomasina izay mila miezaka ny mandroso soa aman-tsara foana. Ny hafanam-po sy ny hafanana dia mahatonga an'ity asa tsy azo antoka ity fa misy fitarihana sy lalàna mifehy ity olana ity.
Fitsipika 5 an'ny Didim-pitsarana Iraisam-pirenena mitondra ny lohateny hoe 'Look-out' dia mamaky, 'Ny sambo rehetra dia tokony hitazona amin'ny fijerena sy fihainoana ary amin'ny fomba rehetra mifanaraka amin'ny toe-javatra iainana sy ny toe-javatra iainana amin'ny fomba rehetra mba hijerena tanteraka ny zava-misy sy ny mety hisian'ny fifandonana'.
Noho izany, amin'ny toe-java-manirery sy mamirapiratra dia mila maka antoka ny tantsambo fa tsy manimba ny lalan-tsarin'ilay sambo ny masoandro. SOLASOLV® Ny filentehan'ny masoandro dia vahaolana tonga lafatra amin'ny olana mifandraika amin'ny masoandro. Mampihena ny haavony hatramin'ny 93%, mampihena ny hafanana eo amin'ny 87% raha miantoka 100% fahamalinana mazava tsara ary fananganana loko marina eo amin'ny toetrandro mazava sy mamiratra.
Tsy misy vahaolana mahafa-po ny varavarankely manjelanjelatra satria afaka mamorona olana izy ireo rehefa mandeha amin'ny alina rehefa mety ho diso ny fanamarihana sy ny jiro ary ny fanondroana loko. Ny ankamaroan'ny lalàna misy eo amin'ny fisehoana amin'ny navigativa dia manala ny hevitr'ireo varavarankely misy polarized sy voasintona, toy ny:
Fitsipika iraisam-pirenena momba ny fiarovana amin'ny haingo haingam-pandeha, famahana ny MSC.97 (73) 15.7.3.
Resaka IMO MSC.31 (63) - Fitsipika 22 - Navigation Bridge Fahitana
Fivarotana Merchant (Fidio ny Bridge Bridge) 1998. Fitsipika fitsipika No. 1419
USCG Lohateny 46 - Subpart 92.03-1
Fizarana 7, Toko 9 amin'ny Fandraketana Navigational amin'ny Periodika Iray Man Watch - Windows, fizarana 2.4.7.
SOLASOLV® Ny masoandro dia indray ny vahaolana tsara indrindra amin'ity lalàna ity. Izy ireo dia manome fiarovan-tena mahagaga, hafanana ary UV lamina, mitovy amin'ny varavarankely voasaina, ary izy ireo azo alaina mora sy azo alaina avy hatrany rehefa tsy takiana.
Noho ny tombontsoa goavana manjavozavo dia manome fampiononana sy fiarovana ny sambo, vao haingana dia navoaka ny lalàna vaovao hanohanana ny fampiasana azy ireo amin'ny sambo rehetra:
IMO 5.1.1.2.6 - Solon-tsakafo azo afindrafindra dia manondro fa 'Mba hiantohana ny fomba fijery mazava sy hisorohana ny fisaintsainana amin'ny masoandro mamirapiratra, dia tokony halefa any amin'ny varavarankely rehetra ny filentehan'ny masoandro misy loko farafahakeliny farafahakeliny. Ireo efijery toy izany dia tokony ho azo alaina mora foana ary tsy hametrahana maharitra '.
Ny ankamaroan'ny trano fanorenana sy ny sambo maro dia efa manondro ny fametrahana ny masoandro mialokaloka amin'ny alàlan'ny varavarankely mba hanaraka ny fangatahana mitombo hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana.